China Inogadziriswazve Packaging Firimu fekitari uye bhizimisi | NEMANGWANA
Inogadziriswazve Kupakata Firimu Inowedzerwa pamupumburu kune ako maratidziro, firimu rakadhindwa rinogona kushandurwa rive chero ripi zvaro kurongedza fomati panguva yefomu, zadza uye unamate maitiro.
Inogadziriswazve Kupakata Firimu.Supplier mumapumburu mune anochinjika kurongedza, isu tinotakura roll mafirimu zvinoenderana neyako magadzirirwo. Iwo anodhinda mafirimu anogona kumhanya nekumhanya kwakanyanya uye mushe pane yakatwasuka fomu zadza chisimbiso (VFFS) uye yakatwasuka fomu yekuzadza chisimbiso (HFFS) muchina. Mushure mekupeta, kuzadza nekuisa chisimbiso, mupumburu firimu unogona kugadzirwa mune chero bhegi mhando. Inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri diki yekupakata, zvakare inonyanya-inoshanda, yakaderera mutengo sarudzo.
Yedu Inogadziriswazve Packaging Firimu inotsvaga kutwasuka fomu yekuzadza chisimbiso (VFFS) uye yakatwasuka fomu yekuzadza chisimbiso (HFFS) kunyorera. Laser yekukora tekinoroji inogona zvakare kushandiswa kune chako chakapedzwa chigadzirwa pachikumbiro.
Inogadziriswazve Packaging Firimu.Yedu Inogadziriswazve Packaging Firimu inoshandisa zvinhu zvinogadziriswazve izvo zvinopa iyo inoshanda kwazvo kumagumo-e-ehupenyu maitiro nepo ichichengetedza pasherufu hupenyu hwemhando. Tinogona kupurinda kusvika gumi mavara pane rotogravure. Nemakore ehunyanzvi ruzivo, isu tinonzwisisa kuti zvakakosha sei kushandisa iyo chaiyo kutaurwa pane fomu zadza chisimbiso michina
> Polyethylene-yakavakirwa firimu > Polypropylene-yakavakirwa firimu
> Yakanyanya kupisa kupisa kwemhando yepamusoro-kumhanya / kuzadza / chisimbiso mafomu > Yakakwira kupisa kupisa kupfuura yakajairwa OPP tambo dzeiri nani fomu / zadza / chisimbiso kumhanya
> Standard mwando chipingamupinyi > Yakanaka hunyoro, oiri yemafuta uye girisi
> Surface yakadhindwa neyekudzivirira overprint varnish > Reverse kana nzvimbo yakadhindwa
> Pre-anokwanisa kuchitoro kudonhedza-kure kuti zvishandiswezve uye Sustainable Packaging Coalition® How2Recycle® polyethylenefilm yekuunganidza nzizi >> Yakafanogadzirirwa kuchitoro kudonhedza-inogona kugadziriswazve uye Sustainable Packaging Coalition® How2Recycle® polyethylenefilm yekuunganidza hova
Chisimbiso Simba Mvura Mvura Yekutapudza Rate
Yakaoma / Frozen
EPP-ILM-STST > 25N / 15mm (chisimbiso) <30g / m2 / zuva (90.0µ firimu) Standard chipingamupinyi <500CC / m2 / (90.0µ firimu) Standard chipingamupinyi ● ● ●
EPP-ILM-HBS > 30N / 15mm (kukiya chisimbiso) <3g / m2 / zuva (90.0µ firimu) Standard chipingamupinyi <1CC / m2 / (90.0µ firimu) Standard chipingamupinyi ● ● ●
Pashure: Zvigadziriswazve Mailer
Zvadaro: Inogadziriswazve Rutivi Gusset Pouches